सञ्जय दत्तले आफ्नी छोरीलाई हिरोइन बन्न नदिने खुलासा - Everest Dainik - News from Nepal
सञ्जय दत्तले आफ्नी छोरीलाई हिरोइन बन्न नदिने खुलासा
२०७३, २४ फाल्गुन मंगलवार
काठमाडौं, फागुन २४ । अभिनेता सञ्जय दत्त पाँच वर्षपछि फिल्ममा फर्किदैछन् । गैरकानुनीरुपमा हतियार राखेको अभियोगमा जेल सजाय भोगेका सञ्जयले बलिउड काफी बद्लिएको पाएको छ ।
यहीबीचमा नयाँ हिरो हिरोईनको जमात खडा भएको पनि देखे । यस्तो अवस्थामा सञ्जय दत्तले कस्तो अनुभुति गरेका होलान् ?
सञ्जय भन्छन्– ‘पाँचवर्ष साईकल चलाएन भने उसले साईकल चलाउन बिर्सन्छ । अभिनय पनि त्यस्तै हो ।’ वास्तव, सडक, मुन्नाभाई एमबीबीएस जस्ता यादगर फिल्ममा काम गरेका सञ्जय हिन्दी चलचित्र ‘भुमी’ वाट कमब्याक गर्दैछन् ।
याे पनि पढ्नुस पोष्टरमा रजनीकान्तसँग बसेको कुकुर ४ करोड तिरेर किन्नेको हानथाप !
बाबुछोरीको सम्बन्धमाथि आधारित यस फिल्ममा सञ्जय बुबाको भुमिकामा देखिँदैछन् भने उनको छोरीको भुमिका अदिति राव हैदरीले निर्वाह गर्ने भएकी छिन् ।
सञ्जय आफैं छोरीको बुबा हुन् । बाबुछोरीको सम्बन्धवारे उनी जानकार छन् । उनकी ठूली छोरी त्रिशाला फिल्ममा आउने योजनामा छिन् ।
तर, सञ्जयले आफ्नी छोरी तत्काल फिल्ममा आउन असम्भव नभएको बताए । ‘अभिनय सजिलो काम होईन, उनले अभिनय गर्नुअघि हिन्दी सिक्नु जरुरी छ ।’ उनले भने– ‘त्रिशाला विज्ञानकी विद्यार्थी हुन् । उनले पठाई पूरा गर्नु छ । यदि पढाई पुुरा नगरी फिल्ममा आइ भने म खुट्टा भाँचिदिन्छु ।’
याे पनि पढ्नुस दीपिका पादुकोणलाई कपडाले धोका दिएपछि.... (हेर्नुहोस् भिडियो)
यति भन्दाभन्दै नारी स्वतन्त्रताको कुरा पनि गरे उनले । आज हरेक पुरुषले महिलालाइ कमजोर सम्भिmने गरेको उनको बुझाई छ । आफुले चाहेको कपडा लगाएर हिँड्दैमा महिला स्वतन्त्र भएको टिप्पणी गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।